यसरी उत्रँदै छ चुनावी मैदानमा विवेकशील साझा पार्टी
२०७४ असोज १० मंगलबार, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सशक्त राष्ट्रिय पार्टी बन्ने रणनीतिका साथ चुनावी रणनीतिमा लागेको छ । ... बाँकी अंश»
दशैँ मनाउन उपत्यकाबाट बाहिरिए १९ लाख यात्रु
२०७४ असोज १० मंगलबार, काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैँ मनाउन हालसम्म १९ लाख यात्रु बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता उमेश रञ्जितकारका अनुसार गत भदौ २० गतेदेखि उपत्यकाबाट बाहिरिएका यात्रुको संख्यालाई दशैँका लागि बाहिरिनेको सूचीमा राखिएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्याभन्दा भित्रिनेको संख्या भने निकै न्यून छ। ... बाँकी अंश»
के बोले यस्तो प्रचण्डले ? ‘एक्लै निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने पक्षमा’
२०७४ असोज १० मंगलबार, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक्लै लडेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
३ स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी, काँग्रेसलाई ३९, बाँकीलाई कति ? (सूचीसहित)
२०७४ असोज १० मंगलबार, काठमाडौँ । प्रदेश नं २ मा मंगलबार बिहान १० बजेसम्म १३३ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री देउवालाई ओमनमा गार्ड अफ अनर, मंगलबार विशेष भेटवार्ता
२०७४ असोज १० मंगलबार, मस्कट । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओमन सरकारले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ । ... बाँकी अंश»
बन्द हड्ताल गर्ने डाक्टरहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदै, एक वर्ष कैद हुनसक्ने
२०७४ असोज ९ सोमबार, काठमाडौं । सकारकारी निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता हुँदै छन् । ... बाँकी अंश»
चिकित्सकको आन्दोलन ऐन र सर्वोच्चको परमादेश विपरीत
२०७४ असोज ९ सोमबार, काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरुलाई कडाई गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएसँगै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
गोविन्द केसी फेरि अनसनमा, के छन् पाँच सूत्रीय माग (विज्ञप्तिसहित)
२०७४ असोज ९ सोमबार, काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले पाँच सूत्रीय माग राखी फेरि १२औँ सत्याग्रह छेडेका छन् । ... बाँकी अंश»
कोल्हवीमा एमालेको अग्रतापछि सफलता, गाड्यो कम्युनिष्टको झण्डा
२०७४ असोज ९ सोमबार, काठमाडौं । बाराको कोल्हवी नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत एक सातापछि आएको निर्वाचनमा एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख दुबैमा विजयी भएको हो । ... बाँकी अंश»
मंसिर १० र २१ गते हुन प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलहरु जुटे
२०७४ असोज ९ सोमबार, पोखरा। स्थानीय तहका तीनै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम पनि आएपछि अब दलहरुको ध्यान आगामी मंसिर १० र २१ हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनतिर गएको छ। जिल्लाका प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवार छनोट गरेर जिल्ला समितिमा पठाउन क्षेत्रीय समितिलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। ... बाँकी अंश»
सोमबार बिहान ९ः०९ बजेसम्म १३१ तहको मतपरिणाम सार्वजनिक, काँग्रेसले तह थप्यो, बाँकी कसले ?
२०७४ असोज ९ सोमबार, काठमाडौं । प्रदेश नं २ मा सोमबार बिहान बजेसम्म १३१ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । ... बाँकी अंश»
एमालेको ध्यान बहुमतमै (पारित प्रस्तावसहित)
२०७४ असोज ८ आइतबार, काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने रणनीति लिएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक
२०७४ असोज ८ आइतबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रिपरिषद्का २८ जना सदस्यहरुले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको सूचना तथा संचार मन्त्रालयले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
२५ वर्षअघि काँग्रेसबाट बागी उठेर उपमेयर जितेका लालकिशोर भए जनकपुरको मेयर
२०७४ असोज ८ आइतबार, धनुषा । प्रदेश नम्बर २ मा सर्वाधिक चासोको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल विजयी भएको छ । ... बाँकी अंश»
नगर सभापति सहित राप्रपाका सय जना कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश
२०७४ असोज ८ आइतबार, काठमाडौं । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाका राप्रपा.का नगर सभापति सहित सय जना कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
दशैँमा काँग्रेसलाई उम्मेदवार छान्ने चटारो, १७ गतेभित्र उम्मेदवारको नाम पठाउन निर्देशन
२०७४ असोज ८ आइतबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले दशैँको बेला जिल्ला कार्य समितिहरुलाई व्यस्त राख्ने गरी परिपत्र गरेको छ । ... बाँकी अंश»
उपेन्द्र यादवको त्यो दुर्लव कदम : जसले संविधान कार्यान्वयनको मार्ग प्रसस्त गर्‍यो
२०७४ असोज ८ आइतबार, काठमाडौं । पहिचानवादी दलहरुसँगको असहमतिकै बीच जारी भएको संविधानको पुनःलेखनको माग गर्ने राजनीतिज्ञ हुन् उपेन्द्र यादव । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले संविधान जारी भएपछि लामो समय आन्दोलन गरेको संघीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्‍यो । ... बाँकी अंश»
दीनानाथ शर्मा भन्छन् ‘माओवादी परिस्थिती अनुसार जुनसुकै दलसँग तालमेल गर्न सक्छ’
२०७४ असोज ८ आइतबार, बागलुङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले आउँदो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र परिवर्तनको पक्षधर जुनसुकै दलसँग परिस्थिती अनुसार तालमेल गरेर जान तयार रहेको बताएका छन । ... बाँकी अंश»